Jose Mourinho Ma Barbar Dhigi Karo Guardiola- Bayern Munich Ayuu Champions League Kula Guulaysan Waayay, Isna FC Porto Ayuu Kula Guulaystay. - Gool24.Net
Isbarbar dhiga Jose Mourinho iyo Pep Guardiola ayaa waqti dheer soo jiray laakiin dhawaan Guardiola ayaa ku guulaystay saddexda koob si uu Mourinho ugaga sare maro koobabka ay soo hanteen.
Pep Guardiola ayaa ku guulaystay 27 koob laakiin intaas oo dhami suurtogal kamay dhigin in la dhaafiyo Jose Mourinho sida uu aaminsan yahay Samuel Eto’o.
Samuel Eto’o oo Pep Guardiola kula soo shaqeeyay Barcelona isla markaana ay Champions League ku soo wada guulaysteen ayaa sidoo kale Mourinho kula soo guulaystay koobka UEFA Champions league.
Samuel Eto’o ayaa ku dooday in Pep Guardiola iyo Jose Mourinho aan lays barbar dhigi karin maadaama oo uu Guardiola ku soo fashilmay in uu Bayern Munich kula guulaysto Champions league.
Halka uu ku dooday in Mourinho uu kooxda FC Porto kula guulaystay koobka kooxaha Yurub ee UEFA Champions League.
Samuel Eto’o ayaa isaga oo ka hadlayay isbar bardhiga lagu sameeyo Jose Mourinho iyo Pep Guardiola oo labaduba ay tababare isaga u soo noqdeen waxa uu saraysiiyay Jose Mourinho oo ay Inter Milan waqti fiican ku soo wada qaateen.
Xidigii hore ee reer Ivory Costa ee Samuel Eto’o oo ka hadlaya Mourinho iyo Guardiola ayaa yidhi: “Anigu ma awoodo in aan Mourinho barbar dhigo Guardiola. Mid ka mid ahi waxa uu Bayern Munich kula guluaysan kari waayay Champions League, halka midka kale uu Porto kula guulaystay”.
Ma aha markii ugu horaysay ee uu Samuel Eto’o mincaarid ku noqdo Pep Guardiola balse dhawaan ayay ahayd markii uu si wayn u weeraray macalinka reer Spain ee uu sheegay in Messi aanu ahayn xidigii Champions League ka caawiyay Guardiola balse uu isaga ahaa.
Samuel Eto’o ayaa dhawaan saxaafada u sheegay in Pep Guardiola uu hortiisa ka sheegay in Lionel Messi aanu isaga ka caawin Champions League balse uu isaga ahaa shaqsigii sababta u ahaa in kooxdii Guardiola ee Barcelona ay Champions League ku soo guulaystay.